मोडेलको बयान त्यसपछि उसले मलाई होटलमा लग्यो…. – Namaste Host
March 2, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on मोडेलको बयान त्यसपछि उसले मलाई होटलमा लग्यो….
भारतको दिल्लीस्थित चाणक्यपुरी थानामा २२ वर्षकी एक युवतीले आफु कर णी भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएकी छन् । प्रहरीले उनको मुद्दालाई ग म्भिरताको साथमा लिएको छ । पिडि त युवती मोडेल भएको हुनाले पनि प्रहरीले उनले दर्ता गराएको मुद्दालाई ग म्भिर ताकासाथमा लिएको हो ।
ती मोडेललाई भेट्नकोलागी मुंबईबाट दिल्ली आएका थिए आरोपी युवक । सोही भेटको क्रममा ती मोडेललाई आरोपीले आफुसंगै फाइव स्टार होटलमा लगेर कर णी गरेको युवतीको भनाई छ । मोडेलको भनाई अुनसार आरोपी युवकले आफुलाई कर णी गर्नुको साथै यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भनेर ध म्की पनि दिएका थिए ।
उक्त घटनापछि ती मोडेल सिधै प्रहरी चौकीमा गएर आफुलाई आरोपीले गरेको सबै कुरा प्रहरीलाई सुनाईन् । प्रहरीको भनाई अुनसार उक्त युवक आफ्नो बुवा र आफन्ताको साथमा दिल्ली आएका थिए । तर पछिभने आरोपी युवकले पि डि त मोडेललाई होटेलमा अलग्गै भेटेर कर णी गरेको र ध म्की पनि दिएको उनले बताईन् ।
ति मोडेलको भनाई अुनसार २० जनवरीमा आरोपीले उनलाई मेसेज गरेको थियो । उक्त मेसेजमा आरोपीले आफु एकजना आफन्तको विबाहमा दिल्ली आउन लागेको बताएका थिए ।
सोही क्रममा आफुहरु भेट्नु पर्छ भन्ने मेसेज गरेको उनले प्रहरीलाई बयान दिएकी छन् । केटाले गरेको सोही मेसेजको आधारमा आफुले सामान्य रुपमा भेटेको तर केटाले भने आफुलाई नसोंचेको व्यवहार गरेको कुरा प्रहरीलाई मोडेलले बताएकी छन् । एजेन्सी ।